संसारकै अनौठो ठाउँ ! जहाँ महिलाले जुनसुकै पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछन्::
संसारकै अनौठो ठाउँ ! जहाँ महिलाले जुनसुकै पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछन्
318 पटक हेरिएको
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा महिलालाई विवाह पछि परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु अनुचित मानिन्छ। परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु भनेको बिवाह धरापमा पार्नु हो ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने चलन छ अफ्रिकाको एक देशमा। जहाँ महिलाहरुले विवाह पछि पनि श्रीमान बाहेक अन्य परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न पाउँछन्।
नाइजर प्रान्तमा केटीहरुले जे पनि गर्न सक्छन्। यहाँ मुस्लिम समुदायमा केटीहरु जस्तै केटाहरु घरमा बस्ने चलन छ । यहाँ ठूला ठूला निर्णय गर्नु परे महिलाले नै लिन्छन्। तुआरेग नामको जातिमा यस्तो चलन छ जुन संसारमा अन्यत्र कतै पनि छैन।
यहाँ महिलाहरुले विवाहपछि पनि पतिबाहेक अन्य पुरुषसँग शारीरक सम्बन्ध राख्न सक्छन्। केटाहरुले भने अनुहार लुकाएर राख्नु पर्छ। महिलाले चाहेमा पुरुषलाई छोड्न सक्छन् पुरुषले भने महिला छोड्ने छुट छैन।
बर्दियामा सडक खन्दा भेटियाे चाँदीका सिक्का
धम्बोझी । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–६ सोनपुरदेखि जोगनपुरसम्म सडक खन्ने क्रममा चाँदी र तामाका सिक्का फेला परेको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले माटोको घैंटोमा राखिएको ५४ मिलिग्राम बराबरको पाँच थान चाँदीका सिक्का र सात केजी दुई सय ग्रामको तामाको सिक्का फेला परेको बताए ।
सडकलाई स्काभेटरबाट खन्दा करीब तीन फिट गहिराइमा चाँदीका सिक्का र तामाका सिक्का फेला परेको प्रहरीेले जनाएको छ । ती सिक्का १३ औँ देखि १७ औँ शताब्दीको मुगलकालीन शासनकालका सिक्का हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
‘नयाँ मुलुक’ बर्दियामा मुगल शासनकालमा चोरी डकैतीका त्रासले माटोमुनि ती सिक्का गाडिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सडक खन्ने क्रममा चाँदीका केही सिक्का गाउँलेले लुकाएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । तामा र चाँदीका सिक्का अनुसन्धानका लागि पुरातात्विक विभागमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।